नेपाली कामदार ठग्ने अबैध संस्थाको रकममा प्रभु साह अष्ट्रेलिया भ्रमणमा – YesKathmandu.com
काठमाडौं । ब्यवस्थापिका संसद अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सभापति प्रभु साह एक गैरकानुनीरुपमा सञ्चालित संस्थाको खर्चमा अष्ट्रेलिया पुगेका छन् । नेपाल सरकारसँग अनुमति नै नलिई गैरकानुनीरुपमा सञ्चालन भएको ‘माइग्राम’ नामक संस्थाको खर्चमा साह अष्ट्रेलिया पुगेको स्रोतले बताएको छ ।
मलेसिया जाने नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परिक्षण गर्नुपूर्व अनिवार्य नाम दर्ता गर्नु पर्ने बाध्यात्मक अबस्था शिर्जना गरी माइग्राम नामक संस्थाले प्रतिकामदार ३ हजार २ सय असुल्दै आएको छ । मलेसिया र नेपाल सरकारको अनुमति विना मे १ देखि सञ्चाल भएको माइग्रामको रकममा साह अष्ट्रेलिया पुगेका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेतासमेत रहेका साह केही समय पहिले माइग्रामलाई कारवाही गर्ने पक्ष थिए । ब्यवस्थापिका संसद अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिमा कारवाहीका लागि छलफल समेत गराएका थिए । आफैले कारवाही प्रस्ताव गरेको संस्थाको रकममा साह सपरिवार अष्ट्रेलिया भ्रमणमा पुगेका छन् ।
मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क २ हजार ६ सयबाट बढाएर ४ हजार ५ सय बनाउने विवादित कम्पनी बेस्टिनेड डीएचडी आइएनएटी नामक संस्थाले नेपालमा माइग्रामको स्थापना गरेको छ । नेपाल सरकारसँग अनुमति नै नलिई सञ्चालमा आएको माइग्रामले हुन्डी मार्फत मलेसियामा रकम पठाउँदै आएको छ ।
मलेसिया जाने कामदारलाई आर्थिक भार थोपर्ने र नेपाल सरकारलाई राजश्व नर्तिने माइग्रामलाई कारवाही गर्न ब्यवसायीहरुले निरन्तर माग गरिरहेका छन् । तर कारवाहीको सिफारिस गर्ने श्रम समितिका सभापति माइग्रामकै रकममा विदेश पुगेका छन् ।
रौतहटमा प्रहरीमाथी खुर्सानीको धुलो प्रहार सात घाइते
टीकापुर हत्यकाण्डका हत्यारालाई कारवाही गरेरै छाड्छु : प्रधानमन्त्री
मन्त्रीज्यू ! लौ न मेडिकल कलेजमा भनसुन गरिदिनुपर्र्यो !
बीनाको पेट छाम्नासाथ राजीनामा
भारतको मुख्य चासो नागरिकता र निर्वाचन, संविधान संशोधन गर्न प्रचण्ड सरकारलाई आग्रह
देउवासँग यसरी टक्कर लिदैं छन खुमबहादुर
बाजुरामा नेपाली सेनाको विमान दुर्घटनाः पाइलटको मृत्यु, दुई घाइते